Cabdilahi Timocade - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay Cabdilahi Suldaan Timocade)
Cabdillaahii Timacade (, ) wuxuu ahaa gabayaa, halabuur iyo xornimo-doon Soomaaliyeed kaasi oo gayiga Soomaaliya si fiican looya yaqaaney.
عبد الله سلطان محمد
Cabdillaahii Suuldaan Maxamed
6 Febraayo 1973
2 Gabayadii Gobanimodoonka
3 Maalintii Xoriyada
4 Sanadihii Dambe
Sanadkii 1920kii Timacade wuxuu ku dhashay tuulada Galooley, oo u dhow magaalada Gabiley ee waqooyigalbeed maamulka maanta loo yaqaano Somaliland. Wakhtiyadii dhalinyarnimadiisa wuxuu Timacade ku soo noolaa deegaano kala duwan oo ka mid ah wadanka Itoobiya iyo Djibouti wakhtigaasi oo ku beegan qiyaastii 1940 ilaa 1950.
Si kastaba ha ahaatee, sanadihii 1950kii ayuu ku soo noqdey magaalada Gabiley halkaas oo uu ka mid noqdey dhaqdhaqaaqii Xornimo-doonkii Soomaalida Waqooyi kula dagaalameysay gumaystihii Ingiriiska. Wakhtiyadaasi gobanimo-doonka wuxuu Timacade tiriyay gabayo badan oo gubaabo, dhiirigelin iyo waxsheeg ah kuwaasi oo dhamaantood ku salaysnaa qiimaha xoriyada iyo walaaltinimada Soomaalida.
Wakhtiyadii gobanimodoonka wuxuu Timocade si joogta u tirin jirey gabayo iyo maansooyin taabanaya xaalada wakhtigaasi taagneyd iyo dhibaatada gumeystuhu dadka ku hayo. Gabayadiisa kuwu ugu caansan waxaa ka mid ahaa:
Inaan Garayacawl uga tagaa waa hal soo gudhaye. .
Dugsi maleh Qabyaaladi:
Dugsi male qabyaaladi waxay dumiso mooyaane .
Markey taariikhdu ahayd 26kii Juun 1960kii waxaa xoriyada qaatey Goboladii Soomaalida Waqooyi kuwaasi oo dagaal culus la galay gumaystihii Ingiriiska. Fagaaraha kheyriyada magaalada Hargeysa oo iskugu soo baxeen dad badan oo u dabaaldegayay guusha xoriyada ayaa waxaa masraxa gabay dhaxalgal ah ka tiriyey Cabdulaahi Suladaan Maxamed Timacade. Gabaygaasi waxaa loo yaqaanaa Kana Siib Kana Saar:
Horaantii sanadihii 1970aadkii, Timacade waxaa ku haleelay xanuun dhuunta kaga dhacay. Mudo markuu bukaan ahaa ayaa markii dambe loo qaadey dhakhtarka Jomo Kenyatta Hospital ee magaalada Nairobi, magaalomadaxda wadanka Kenya, halkaasi oo lagu soo daaweeyey.
Nasiib-daro 6 February 1973 ayuu Cabdulaahi Suldaan Timacade ku geeriyooday magaalada Kalabaydh. Waxaa lagu aasay magaalada Gabiley.
Qaran News, The life and times of Cabdilahi Suldaan Timacade
Saylici Press, Gabaygii calanka ee Timocade: Kaana Siib kana Saar
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cabdilahi_Timocade&oldid=204160"
Last edited on 28 Luuliyo 2020, at 00:20
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Luuliyo 2020, marka ee eheed 00:20.